HIM | Health in Myanmar » 2012 » October
အမေးအဖြေ (၈၅) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
မိန်းမကိုယ်ခေါ်တဲ့ Vulva ဆိုတာ သူ့ပုံပန်းနဲ့သူ မတူတာတွေရှိတယ်။ ဒီအတွက် ကြောင့်ကျဘို့ မလိုပါ။ အိမ်ထောင်ပြုချိန် ငယ်တုံးကလို ဖြစ်ချင်တာအတွက် အဝနေရာနဲ့ အတွင်းလှိုင်ခေါင်းပိုင်း နှစ်ခုသာ အရေးပါတယ်။ အပြင် အမြင်တော့ ပြောခဲ့သလို ပြင်ဘို့မလိုအပ်ပါ။ အဝဆိုတာ မွေးလမ်းကနေ မွေးဘူးသူတွေသာ ပြုပြင်သင့်ရင် ချုပ်ပေးတာ လုပ်ဘို့လိုမယ်။ မဟုတ်ရင် အဝဟာ အကောင်းပကတိသာရှိမယ်။ အတွင်းလှိုင်လိုအပိုင်းမှာလဲ ဒီအတိုင်ပါဘဲ။ မေးတဲ့ သူက လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေတာမို့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။
A comment onaposting
Afteraposting at http://www.hivinfo4mm.org/?p=4695, an anonymous reader noted: “For four years I have worked in health and HIV in Myanmar and I’ve never heard or seen Dr Beyrer around. MSF is treating many eligible HIV patients: Yangon is the location that has enrolled the largest number of patients with the lowest CD4 cell counts, […]
Truth is more important than fulsome praise
Michel Sidibe is not finished talking about his trip to Asia. Remember Piot saying HIV would cut through China likeahot knife through butter? Look at his statement on eliminating mother to child transmission of HIV. That requires detecting and treating every single pregnant woman living with the virus. This is impossible and this […]
ကုန်ကျစရိတ် အသက်သာဆုံးဖြင့် HIV ရောဂါ စမ်းသပ် ရှာဖွေမှု ပြုလုပ်နိုင်တော့မည်
ကင်ဆာရောဂါ သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်ရှိ/ မရှိကို စမ်းသပ် ဆေးရည် အရောင်ပြောင်းလဲ မှုဖြင့် ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ ပစ္စည်းသည် HIV နှင့် အခြားရောဂါများ ရှာဖွေစမ်း သပ်မှုတို့ အတွက် ရှေ့တန်းသို့ ရောက်ရှိလာနိုင် သည်ဟု လန်ဒန် တော်ဝင် ကောလိပ်မှ တီထွင်သူ ပညာရှင်များက ပြောကြားသော်လည်း စမ်းသပ်မှုများ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင် သွားရန် လိုအပ် နေပါသည်။
အမေးအဖြေ (၈၄) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A2 comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, ပညာပေး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
သွေးအရောင်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အပုတ်ရောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ နေ့စဉ် နဲနဲ ပေါ်နေခဲ့ ပါသည်။ ရက်ကြာလာသည့် အတွက် စိတ်ပူနေပါသည်။ မည်သို့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် ရမည်ကို ဖြေကြားပေးပါရန်။
What is Sidibe smoking?
This plan – though the goal or target is not mentioned, it appears to be 100% – is not realistic or achievable. “I am sure if resources are made available to Myanmar, the country will reach its ambitious goal …” Did Sidibe just say that the constraint to 100% coverage of PMTCT is money? What […]
Nobel prize winner and the last mile
The ‘last mile’ metaphor used in this context is incomprehensible to me. Getting over 80% of eligible people living with HIV on treatment is the first mile, not the last one. And what mile is prevention on? Eight Mile? Are any readers up to date on the latest evidence-informed activities to reduce discrimination? Please help […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, Q&A, ဆောင်းပါးno comments | Tags: AIDS, HIV, ကျန်းမာရေး အသိ, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
MSM တွေမှာ HIV နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေတွေ အများကြီးရှိတယ်။ HIV နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒါတွေကို ကူညီချင်တဲ့ စိတ်တွေကြောင့် ဒီလိုမျိုး ဖွင့်ပြောတာပါ။ အခုလို ဖွင့်ပြောချင်းအားဖြင့် တခြား MSM တွေက အကူအညီလိုရင် ကိုယ့်ကို ဖွင့်ပြောပြီး အကူအညီ တောင်း လာနိုင်တယ်။
A yawner ofapress release
This press release isabit ofayawner. One hopes the visit was not. What does the VP think are the main human resource challenges for HIV in Myanmar? Yes, some very bad laws date back to colonial times. But the narcotics law is new. And unjust outdated colonial laws do not need to […]
အမေးအဖြေ (၈၃) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A5 comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကျွန်တော့်ရဲ့ သူချင်းတစ်ယောက် အခက်တွေ့နေလို့ပါ။ အသက် ၂၂ ပါ။ ဖြစ်တာ ၅ လလောက်ရှိပါပြီလို့ ပြောတယ်။ ၁ ပါတ်ကို ညညဆို ၂ ၇က် လောက် အလိုလို သုတ်ထွက်နေ တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နောက်ရက်ဆို အားယုတ်ပြီး အလုပ်မဆင်းနိုင်ရင် စူပါဘိုက်ဇာနဲ့ ပြဿနာသတ်နေရလို့ပါ။ ဆေးခန်းကိုတော့ ၁ ခါပြဘူးတယ်လို့ ပြော ပါတယ်။
Are these the images?
Are these the images that advocates for treatment want the world to see about the lives of people living with HIV in Myanmar? Looks like released raw footage to me. Do the videographers have the consent of the people whose images they took? [him] moderator ++++++++++++++++++
Author: HimBur | Category: Myanmar, News, ဆောင်းပါး2 comments | Tags: HIV, ကျန်းမာရေး အသိ, ပညာပေး
HIV ပိုးရှိသူတွေ အနေနဲ့ ရာသီသွေးနည်းတာ၊ သွေးကျဲတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချိန် မတိုင်ခင် မီးယပ်သွေးဆုံးတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၄၉ နှစ်မှ ၅၃ နှစ် အရွယ်မှာ သွေးဆုံးတတ်ပေမဲ့ HIV ပိုးကူးစက်ခံရသူတွေမှာ ၄၇ မှ ၄၈ နှစ်အရွယ်မှာ သွေး ဆုံးတတ်ပါတယ်။